မြန်မာပြည်သူတွေ အတွက် အလှူငွေတွေ ကောက်ခံ ပြီး စာရေး ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ ဂျပန် လူမျိုးတွေ ကို ကျေးဇူးတင် စကားဆိုလာတဲ့ ဟန်နာယူရီ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / မြန်မာပြည်သူတွေ အတွက် အလှူငွေတွေ ကောက်ခံ ပြီး စာရေး ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ ဂျပန် လူမျိုးတွေ ကို ကျေးဇူးတင် စကားဆိုလာတဲ့ ဟန်နာယူရီ
မြန်မာပြည်သူတွေ အတွက် အလှူငွေတွေ ကောက်ခံ ပြီး စာရေး ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ ဂျပန် လူမျိုးတွေ ကို ကျေးဇူးတင် စကားဆိုလာတဲ့ ဟန်နာယူရီ
By Ga MonePosted on May 1, 2021 May 1, 2021
လွန်ခဲ့သော ၁၃ နာရီ က 20:56 April 30, 2021
Makeup Artist အဖြစ် အောင်မြင်မှုတွေအခိုင်အမာ ရရှိ ထားသလို အနုပညာလောက မှာလည်း ပရိသတ်အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို များစွာရရှိထားတဲ့ ဟန်နာယူရီကတော့ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာလည်း ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
လက်ရှိအခြေအနေတွေမှာ အလှူငွေတွေကောက်ခံပြီး စာရေး ဆုတောင်းပေးကာ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်ပေးနေတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေကိုလည်း ဟန်နာယူရီက သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာကနေ အသိအမှတ်ပြုရေးသားကာ ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလာပါတယ်..။
မြန်မာအကြောင်း ဂျပန်လူမျိုးတွေပိုသိလာစေဖို့ ဂျပန် ပြည်သူတွေ ဆီကနေ CDM အလှူငွေကောက်ခံမှုနဲ့ ဆုတောင်းစာလေးတွေ စုဆောင်းတဲ့ပွဲလေးတွေကျင်းပပြုလုပ်ပြီး ဖေးမကူညီပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။
အခုလို အားလုံးနဲ့အတူရပ်တည်ပေးတဲ့ ဂျပန် လူမျိုးတွေ ရဲ့ ကျေးဇူးကို မမေ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အတူ ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့စာလေးတွေ မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ လက်ခံရရှိတဲ့အကြောင်းတွေကို သာဘာစကားသုံးမျိုးနဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
ဂျပန်နိုင်ငံ ဖူကူအိုကာမြို့မှာ မြန်မာအကြောင်း ဂျပန်ပြည်သူတွေပို သိလာစေဖို့ ဂျပန်ပြည်သူတွေဆီကနေ CDM အလှူငွေကောက်ခံမှုနဲ့ ဆုတောင်းစာလေးတွေ စုဆောင်းတဲ့ပွဲလေးတွေကျင်းပနေပါတယ်
April 11/12 မှာ ပထမအကြိမ်
ခု April28/29မှာ ဒုတိယအကြိမ် ဖူကူအိုကာမြို့မှာ နှစ်ကြိမ်လုပ်တာပါ တခြားမြို့တွေမှာလည်းလုပ်ပါတယ်
ဖူကူအိုကာတစ်မြို့တည်း ပထမအကြိမ် ဧပြီ၁၁/၁၂မှာ သိန်း၅၀ကျော် ဒုတိယအကြိမ်၂၈/၂၉မှာလည်း သိန်း၅၀ကျော် စီ ရထားပါတယ်
ဂျပန်လူမျိုးတွေ ကျွန်မတို့နဲ့ ရပ်တည်ပေးတဲ့အတွက်၊ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေကို ကျွန်မတို့မြန်မာပြည်ကိုဖေးမကူညီပေးတာ
ကျွန်မတို့မြန်မာပြည်က ပြည်သူတွေက ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ရှင် ။ဂျပန်လူမျိုးတွေကို အရမ်း ချစ်ပါတယ်🙏❤️🇯🇵
ခွန်အားဖြစ်အားတတ်စေတဲ့ စာလေးတွေ ကော ကျွန်မတို့မြန်မာလူမျိုးတွေလက်ခံရရှိကြောင်း ကျွန်မဟန်နာရဲ့ Pageကနေ အသိမှတ်ပြု ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်
日本人皆様にミャンマーの現在を正しく詳しく知ってもらうため　写真パネル展示を　福岡県福岡市九州で　2021年4月11/12日に1回目、28/29日に　2回目行いました。
福岡市の展示2回で　日本人お客様200人以上参加して　募金80万円以上もらいました。
A photo panel exhibition was held in Kyushu, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture for the first time on April 11, 2021 and for the second time on 28/29 so that Japanese people could know the current situation of Myanmar correctly and in detail.
There are plans to continue exhibiting photo panels in other towns throughout Japan.
At the two exhibitions in Fukuoka City, more than 200 Japanese customers participated and receivedadonation of 800,000 yen or more.
I also receivedaprayer message from participants who are worried about Myanmar.
Thank you to all the Japanese people who are with the people of Myanmar for cherishing and worrying about Myanmar. We really appreciated and heartfelt thanks to you all ! Thank you all so much for supporting Myanmar 🇲🇲🇯🇵🤍🙏
japan WhatsHappeningInMyanmar #japanese southeastasia SaveMyammar Asia Democracy Burma Myanmar fukuoka..” ဆိုပြီး ရေးသားပြောပြထားတာပါ..။
ဘာသာ စကားသုံးမျိုးနဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားတဲ့ ဟန်နာယူ ရီရဲ့ ပို့စ်အောက်မှာတော့ ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်း ဆုတောင်းစကားတွေနဲ့ ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းတွေ ပြောထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။
Photo Credit – Hannayuri Fb Acc
Previous post တစ်ယောက် တစ်နေရာစီ ရောက်နေ ကြတဲ့ နှင်းဆီ အဖွဲ့သားများ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းဝေးကြစေရန် ဆုတောင်း မေတ္တာပို့သပေးနေတဲ့ မောင်မျိုးမင်း
Next post စွန့်ပစ်ခံ ရတဲ့ လူ မမယ် ကလေး မှန်သမျှ ကြင်နာနွေးထွေး မှုဖြင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ အသင့်ရှိ နေကြောင်း ပြောပြ လာ တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ